कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च - Health Today Nepal
June 4th, 2020 समाचार0comments
काठमाडौँ, २२ जेठ : कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अहिलेसम्म सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले बताएका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बिडारीले जानकारी दिए । बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
सचिव बिडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । स्थानीय तहबाट भएको खर्चको पूर्ण विवरण आइनसकेको उनले बताए । कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए ।
समिति बैठकमा लकडाउनलाई सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । लकडाउन खुकुलो बनाउनेबारे स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग पनि समितिले छलफल गरेको छ । तहगत रुपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गरी सरकारलाई बझुाउने समझदारी पनि बैठकमा बनेको छ । यसैबिच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार नै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु बोलाएर लकडाउनको स्वरुप फेर्ने की भन्ने बिषयमा छलफल गरेका छन । विज्ञहरुले परीक्षणको दायरा बढाएर लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. समिरमणी दिक्षितले जानकारी दिए ।
Previous article चिकित्सक संघले सुरु गर्यो स्वास्थ्यकर्मीका लागि कोरोना केन्द्रित अनलाइन तालिम
Next article स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्रालय तानिए, डा. दीपेन्द्ररमण सिंह भए विभागको महानिर्देशक